ဘာစီရဲ့ခြေချော်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူရမယ့် ရီးရဲလ်တို့ ဆိုစီဒက်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မလား? – MySport Myanmar
ဘာစီရဲ့ခြေချော်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူရမယ့် ရီးရဲလ်တို့ ဆိုစီဒက်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မလား?
ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ လာလီဂါပွဲစဉ်(၃၀)အဖြစ် ကစားခဲ့ရတဲ့ ဆီဗီလာအသင်းနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးမရှိသရေကျပြီး ခြေချော်သွားခဲ့တာကြောင့် သူရဲ့အောက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ် ရီးရဲလ်ရင်ဆိုင်ရမယ့် အသင်းကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဆိုစီဒက်အသင်းဖြစ်နေတာကြောင့် ပွဲကျပ်နေမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ ပွဲအကြောင်းကို အသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။
ဆိုစီဒက်က အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်သလို အိမ်ကွင်းကစားအားလည်း ကောင်းမွန်လှတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့်(၅)နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကိုဗစ်အပြီး လာလီဂါပြန်လည်စတင်ချိန် (၂)ပွဲ ကစားထားခဲ့ပြီးနောက်မှာ နိုင်ပွဲလုံးဝကို မရနိုင်သေးပဲ အိုဆာဆူနာကိုသရေ အလာဗက်စ်ကို အရေးနိမ့်ထားပါတယ်။ အသင်းရဲ့အနေအထားက သွေးပူနေချိန် မရောက်သေးခင်မှာပဲ ရီးရဲလ်လို အသင်းမျိုးနဲ့ ထပ်ဆုံနေရတာ ကံဆိုးသလို အသင်းရဲ့အမာခံကစားသမား အိုဒီဂတ်ကလည်း အဖျားဝေဒနာကြောင့် ပါဝင်ကစားဖို့ မသေမချာဖြစ်နေရပါတယ်။
ရီးရဲလ်ကတော့ လာလီဂါပွဲတွေ ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်မှာ (၂)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့သလို ဗလင်စီယာကိုတောင် ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလို ပွဲဆက်များနေချိန်မှာ အဆန်စီယိုလို ကစားသမားမျိုးပါ ပြန်ကစားလာနိုင်ပြီး ခြေစွမ်းပါတန်းပြနိုင်ခဲ့တာတော့ ရီးရဲလ်အတွက် စိတ်အေးစရာ ဖြစ်စေရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရှေ့မှာ နိုင်ခဲ့တဲ့(၂)ပွဲလုံးက ဒီစတီဖာနိုကွင်းမှာ ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အခု ဆိုစီဒက်နဲ့ပွဲကတော့ အဝေးကွင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က ဘောလုံးရာသီတုန်းကလည်း ရီးရဲလ်ဟာ ဆိုစီဒက်ကို အဝေးကွင်းမှာပဲ အရေးနိမ့်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆိုစီဒက်က ရီးရဲလ်နဲ့ဆုံတိုင်းမှာ အမြဲဒုက္ခပေးတတ်လေ့ရှိတဲ့ အသင်းဖြစ်သလို ကိုပါဒယ်ရေးမှာလည်း ရီးရဲလ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဖိုင်နယ်တတ်လှမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီရာသီမှာ ရီးရဲလ်အသင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ အိမ်ကွင်းရှံးပွဲမရှိသေးတဲ့ စံချိန်ကိုလည်း အဲ့ဒီကိုပါဒယ်ရေးပွဲမှာပဲ ဆိုစီဒက်တို့က ရိုက်ချိုးပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စံချိန်တွေကို ရိုက်ချိုးထားတဲ့ ဆိုစီဒက်ကို လက်စားချေချင်နေမှာ သေချာသလို ဘာစီတို့ရဲ့ခြေချော်မှုကိုလည်း အခွင့်ကောင်းယူရမယ့် ရီးရဲလ်တို့ပဲ နိုင်ပွဲရပါလိမ့်မယ်။ နှစ်သင်းပေါင်း ဂိုးများနိုင်ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-06-21T12:44:35+06:30June 21st, 2020|Football, La Liga|